အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အနက်ရောင် bean ကိုတိုတောင်းခေါက်ဆွဲ(7.0mm) - တရုတ်အော်ဂဲနစ် gluten �မီလီမီတာ��မဲ့အနက်ရောင် bean ကိုတိုတောင်းခေါက်ဆွဲ(7.0mm) ကုန်သွင်းသူ,စက်ရုံ -Qianna
Tianjin QianNa စိုက်ပျိုးရေး
ကုန်ပစ္စည်းများ Ind ။, Ltd မှ.
ဘယ်အချိန်မဆို EMAIL အမေရိကန်ပေးပို့ခြင်း qianna@qiannafoods.com
အခမဲ့ bean ကိုခေါက်ဆွဲ gluten
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » အခမဲ့ bean ကိုခေါက်ဆွဲ gluten
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အနက်ရောင် bean ကိုတိုတောင်းခေါက်ဆွဲ(7.0မီလီမီတာ)
ကြံ့ဖွံ့ CERES BRC HACCP ISO9000
200g / အိတ်
3000 တန်ချိန် / တစ်နှစ်လျှင်
အနက်ရောင် bean ကိုတိုတောင်းခေါက်ဆွဲ၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအနက်ရောင် bean ကိုဖြစ်ပါတယ် , အရာများစွာကိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိပါတယ်.
1. Black ကပဲသင့်ရဲ့အစာခြေစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီစေခြင်းငှါ.
အဆိုပါအနက်ရောင် bean ကိုဖိုင်ဘာနှင့်အတူတက်နေတဲ့. ဖိုင်ဘာချုပ်တားဆီးကူညီစေခြင်းငှါ, စီမံခန့်ခွဲရန်ပိုမိုလွယ်ကူတဦးတည်းရဲ့အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုကိုအောင်.
2. Black ကပဲဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့သွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
ဖိုက်ဘာနဲ့မှန်မှန်အစာခြေ၏မြင့်အကြောင်းအရာကိုလည်းသွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့်အတွက် spikes နှင့်ပျက်ကျတားဆီး. Unsteady သကြားအဆင့်ဆင့်ဆီးချိုရောဂါအတွက်ဆိုးဝါးစေနိုင်သည်.
3. Black ကပဲတဦးတည်းထင်စေခြင်းငှါထက်ပို antioxidants ဆံ့.
အဆိုပါအနက်ရောင် bean ကိုမဆိုအခြား bean ကိုထက်ပိုမိုဓါတ်တိုးလှုပ်ရှားမှုပါရှိသည်. လေ့လာမှုတစ်ခု, အဆိုပါစိုက်ပျိုးရေးဂျာနယ်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာဓာတုဗေဒ၌ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 2003, မှောင်အမျိုးအနွယ်ကိုအင်္ကျီနှင့်အတူပဲမျိုးစုံပိုပြီး flavonoids ပါရှိသောကြောင့်ထင်ရှား. Flavonoids ရောဂါနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အစွန်းရောက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ antioxidants အဖြစ်အလုပ်လုပ်စေတဲ့အရောင်ထုတ်လုပ် phytonutrient ဆိုးဆေးများမှာ. Phytonutrients စက်ရုံဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်, အခြားသူများထက်စက်ရုံရဲ့အရောင်တချို့ပိုပြီးတာဝန်ရှိ, ကြောင်းခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်ရောဂါများမှရှင်သန်မှုများအတွက်စက်ရုံရဲ့စွမ်းရည်ကိုကူညီပေးသည်.
4. Black ကပဲသင်ကနုပျိုရှာဖွေနေနေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
anthocyanin နှင့်တူ antioxidants ရောဂါများဆန့်ကျင်မှသာမတိုက်ကြ. Black ကပဲမျိုးစုံနေရောင်ခြည်ပတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်မတန်မီအိုမင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့အလားအလာဆံ့.
5. Black ကပဲတစ်ဦးချင်းစီနဲ့ပတ်သက်လို့အဆိပ်ဖြေပေးပါတယ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
Sulfites ဝိုင်မှာတွေ့ရှိအက်ဆစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်, အခြောက်လှန်းအသီးအပွ, တချို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော, ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းကိုက်တျရှုပျထှေးအဖြစ်. လေ့လာရေးအနက်ရောင်ပဲမျိုးစုံ molybdenum အတွက်အလွန်မြင့်သောပြခဲ့ကြ, မကြာခဏအစားအစာများ၌တွေ့မရှားပါးဓာတ်သတ္တု. ဤသည်ဓာတ်သတ္တုသည်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုး counteracts.
6. Black ကပဲမျိုးစုံမှာလည်းသင့်ရဲ့ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
Black ကပဲမျိုးစုံမှာလည်းဦးနှောက်ကိုလိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များကို, ဗီတာမင်, နှင့်သတ္တုဓာတ်. တချို့ကဗီတာမင်, ဗီတာမင် B9 နဲ့ဖောလိတ်အပါအဝင်, အာရုံကြောစနစ်လိုအပ်သည်တိကျတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်များစည်းမျဉ်းများတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။
အော်ဂဲနစ်အနက်ရောင် bean ကိုတိုတောင်းခေါက်ဆွဲ
672KJ / 161k ကယ်လိုရီ
အရာ Saturation ၏
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: အော်ဂဲနစ်အနက်ရောင် bean ကိုအမှုန့်, အော်ဂဲနစ်အနက်ရောင်ဆန်အမှုန့်, ရေ
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အစိမ်းရောင်ပဲပုပ်တိုတောင်းခေါက်ဆွဲ(3.7မီလီမီတာ)
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့ပဲပုပ်တိုတောင်းခေါက်ဆွဲ (7.0mm)
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့ adzuki bean ကို spaghetti
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အညိုရောင်ဆန် rotina
Tianjin QianNa စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ Ind ။& ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်, Ltd မှ.
Add: RM 2406, အဘယ်သူမျှမ.4Beichen အဆောက်အအုံ, Beichen ခရိုင်, Tianjin 300400, တရုတ်နိုင်ငံ
မူပိုင်ခွင့်© 2018 Tianjin QianNa စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ Ind ။& ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်, Ltd မှ.